पुष्पलाललाई गद्दार घोषित गर्नु गल्ती थियो, त्यसलाई पछि हामीले सच्यायौं | Ratopati
सन्दर्भ : पुष्पलाल स्मृतिदिवस
personरातोपाटी exploreकाठमाडौं access_timeसाउन ७, २०७७ chat_bubble_outline0
पुष्पलाललाई मैले सानैदेखि चिनेको हुँ । काठमाडौमा विद्यार्थी छँदा नै सात आठ सालदेखि मैले उहाँका गतिविधिहरु एवं उहाँलाई चिन्ने मौका पाएँ ।
पुष्पलालसँग मेरो पहिलो भेट २००८ सालमा डा. केआइसिंह काण्डका बेला भयो । केआई सिंहले सिंहदरवार कब्जा गरेका थिए त्यसबेला । सिंहदरवार कब्जापछि उनले पुष्पलालसहित केही मान्छेलाई बोलाएका थिए । संयोगवश, मलाई पनि पुष्पलालसाथै केआइ सिंहकोमा जाने मौका मिल्यो । त्यो वेला नै भएको हो मेरो उहाँसँगको पहिलो भेट । सबैलाई थाहा छ, केआई सिंहको विद्रोह पछि उनी भागेर चीनतर्फ गए र कम्युनिष्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो । पुष्पलाल समेत पार्टीका धेरै नेता भुमिगत हुनुभयो ।
पुष्पलालसँग मेरो पहिलो भेट २००८ सालमा डा. केआइसिंह काण्डका बेला भयो । केआई सिंहले सिंहदरवार कब्जा गरेका थिए त्यसबेला । सिंहदरवार कब्जापछि उनले पुष्पलालसहित केही मान्छेलाई बोलाएका थिए । संयोगवश, मलाई पनि पुष्पलालसाथै केआइ सिंहकोमा जाने मौका मिल्यो । त्यो वेला नै भएको हो मेरो उहाँसँगको पहिलो भेट ।
दोस्रो महाधिवेशनमा राजतन्त्र कि गणतन्त्र’ भन्नेमा पार्टीमा विवाद थियो । मनमोहन अधिकारी र पुष्पलालहरु वैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । द्वितीय महाधिवेशनमा गणतन्त्रको पक्षमा ठुलो उभार देखेपछि पुष्पलाल गणतन्त्रको पक्षमा आउनुभयो । पुष्पलाल गणतन्त्रको पक्षमा आएपछि तुल्सीलाल रायमाझीको पक्षमा जानुभयो ।
दरभंगा प्लेनमबाट पुष्पलाल र हाम्रोबीचमा मतभेद भयो । त्यो प्लेनमभन्दा पहिलेसम्म हामी सवै संविधानसभाको पक्षमा थियौं । त्यहीबेला नेपाली काँग्रेसले कलकत्ताबाट विघटित संसद पुनस्थापनाको नारा दियो । पुष्पलालजीले पनि त्यही नारा लिएर जानुपर्छ भनेर भन्नुभयो र संविधानसभाको नारालाई छाड्नुभयो । तर त्यसलाई मैले समर्थन गरिनँ । त्यसबेला संविधानसभाको चुनावको पक्षमा केन्द्रिय समिति म एकजना मात्र भए ।
मैले प्लेनममै ‘रायमाझी राजासँग मिलेको हुनाले उसलाई निस्काशित गर्नुपर्छ, कारवाही गर्नुपर्छ’ भनेर प्रस्ताव राखें । प्लेनमको अध्यक्षता गरिरहनुभएका तुलसीलाल हलमै घ्वाँघ्वाँ रुनुभयो । उहाँ नराम्रो दृष्टिले रुनुभएको थिएन, पार्टी फुट्ने भयो भनेर रुनुभएको थियो । त्यसबेला माझीलाई कारवाही गरेको भए पार्टी फुट्ने अवस्था नै आउने थिएन र पार्टीको त्यस पछिको इतिहास बेग्लै हुन्थ्यो ।
कागज नगरिकन कसैलाई नछाड्ने सरकारको नीति र कागज गरेर कोही पनि नछुट्ने हाम्रो निर्णयका बीच माझी गिरफ्तार भएको एकै महिनामा छुट्नुभयो । माझी छुटेपछि पार्टीमा यो प्रश्न उठ्यो : उहाँ कसरी छुट्नु भएको थियो ? हामीले मनमोहन जेलमै भएकाले उहाँ कसरी छुटे भनेर भरतमोहन अधिकारीलाई बुझ्न पठायौं ।
१ महिनासम्मको छलफलपश्चात हामीले नेपाली काँग्रेसलाई राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको पार्टी, मित्र शक्ति मान्नु गलत हो भन्ने निर्णय गर्यौं । वर्गीय दृष्टिकोणले काँग्रेसको पनि वर्गीय आधार राजाको जस्तै हो र त्यो सामन्त, दलाल र नोकरशाही पूँजीपति वर्गको पार्टी हो भन्ने निर्णय गरी सोहीअनुसार दस्तावेज तयार पारेर बाहिर पार्टीमा पठायौं । त्यो बेला खाली निर्मल लामाको मात्र त्यो नयाँ विश्लेषणमा मतभेद थियो । तर पछि जेलबाट निस्केपछि उहाँले पनि त्यो विश्लेषणलाई समर्थन गर्नुभयो ।
२०१७ सालको काण्डपछि सुरक्षा कानुनअन्तर्गत गिरफ्तार भएका राजबन्दीहरु मध्ये कागज गर्न अस्वीकार गर्नेहरुमा हामी तीनजना मात्र थियौं– गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई र म । धेरै बिरामी भएपछि पनि कोइरालाले माफी माग्न वा कागज गर्न मानेनन् । पछि उनलाई स्वास्थ्यका कारण देखाउँदै विराटनगर लगेर कागज नगराइकन छोडियो । भट्टराई पनि कागज नगरिकनै छुटेका हुन् । विपी, गणेशमान, शम्भुराम, मनमोहनहरु कागज गरेरै छुटिसकेका थिए ।
केशरजंग रायमाझी, डीपी अधिकारी लगायत अन्य कैयन नेताहरुले आत्मसमर्पण वा पलायनको बाटो समात्दै गए । तर उहाँले कहिल्यै सम्झौता वा समर्पण गर्नुभएन । अतः उहाँले लिएका नीति र सिद्धान्तमा रहेका मतभेदकै आधारमा उहाँलाई गद्दार भन्नु गलत भयो भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्यौं । अतः उहाँसँगको सैद्धान्तिक, नीतिगत मतभेदहरुलाई कायम राख्दै उहाँलाई भनेको गद्दार शब्दको प्रयोग गल्ती भएको छ भनेर हामीले फिर्ता लियौं ।
पुष्पलालसँग कैयन सैद्धान्तिक मतभेदहरु हुँदा हुँदै पनि हामी उहाँलाई सम्मान गर्छौं । नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापनामा उहाँको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । त्यसैगरी, राजतन्त्र एवं पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्धको संघर्षमा उहाँले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन समर्पण गर्नुभयो । हामीले उहाँको त्यो योगदान, समर्पण र बलिदानको सम्मान गर्नुपर्छ, उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण छ ।
(नेकपा मसालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहसँग रातोपाटीका लागि चन्द्र खाकी र फणिन्द्र नेपालले गरेको कुराकानीका आधारमा तयार पारिएको आलेख)
#नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी#मोहनविक्रम सिंह#पुष्पलाल